Ahoana no mety hahatonga ny havizananao handreraka ny havizanana - Fanahy
Mihoatra ny havizanana izany, lasa lavitra ny havizanana… io no avo indrindra - na tokony ho lalina izany - ny havizanana.
Io ilay karazana fahatsapana izay mahatonga anao te hijanona tsy hihodina amin'ny baolina isa-maraina, eo ambanin'ny ampinga miaro duvet mafana sy malefaka.
hevitra hatao rehefa mankaleo
Faharerahana amin'ny fiainana izay manaraka anao na aiza na aiza alehanao, toy ny aloka faharoa manenjika anao, manome taratra ny fihetsinao rehetra.
Raha tokony mifoha tsy mahita mandeha ianao, dia miarahaba famoizam-po noho ny famoizam-po. Vao nanomboka ny andro, saingy efa mandeha amin'ny foana ianao.
Kafe, siramamy 4: io no fomba tokana ahafahanao manetsiketsika ny sombin-java-miafina ao an-tsainao sy miasa ho olombelona 'normal'.
Inona no tsy nety?
Tsy misy dikany, tsy misy antony manosika
Ny valiny dia manomboka amin'ny ny tena tanjon'ny fisianao .
Na ny tsy fahampiana miharihary amin'izany.
Tsy mbola hitanao izay ataonao eto. Inona ianao te hatao eto. Azonao antoka anefa fa tsy ny zavatra ataonao izao.
Mahita fahafinaretana kely ianao amin'ny andronao. Mbola tsy nihozongozona lavitra ny lemaka malama ianao raha tsofina tanteraka krizy misy .
Fa ny fotoana fifaliana sy fahasambarana dia mihelina, ary tsy ampy handao anao izy ireo Misy dikany afa-po.
Ny fanamafisana ny dikany dia natao. Io dia eo an-tampon'ny tsy fahampian'ny herinao.
Mahazo hery ara-tsakafo ampy isan'andro ianao, saingy tsy ampy ny angovo ara-tsaina sy ara-pientanam-po. Ary noho izany, tsapanao raraka mandrakizay .
Tahaka ny fihinananao sakafo hamenoana ny fivarotanao siramamy, tavy ary ireo fananganana ilaina amin'ny vatanao, dia mila mihinana karazana fiainana mety koa ianao mba hanatsarana ny vilany ara-panahy anananao.
Ireo traikefa ireo dia tsy mitovy amin'ny tsirairay amintsika, saingy feno dikany feno izy ireo. Io dikany io no manaitra antsika amin'ny torimasontsika.
Ny dikany dia ny solika ho an'ny fanahy, ny fanahy, na inona na inona tianao hiantsoana azy. Ny dikany dia manome antsika antony manosika hanaiky isan'andro sy ireo mety ho vokatr'izany.
Rehefa tsy eo ny dikany dia toy izany koa ny antony manosika. Rehefa tsy eo ny antony manosika dia hihena tsimoramora ny bateria misy anao mandra-pahatonga anao ho tery anaty maody ambany.
Amin'ity toe-piainana misy ity dia tapaka ny dingana tsy ilaina. Tsy afaka mitazona ambaratongan'ny fahamailoana intsony ianao, ny eritreritrao sy ny fahaizanao mamorona dia alaina ivelan'ny Internet, ary matanjaka ny fitiavanao.
Mandeha amin'ny fivoarana mandroso ianao.
Haintanana maharitra avy eo. Rehefa tsy misy angovo ara-tsaina dia manjary maloka ny fihetseham-ponao. Ankoatr'ireo fotoana nahafinaritra nifaly voalaza etsy ambony ireo, ny sisa amin'ny fisianao dia mandehandeha, tsy misy fotony, matanjaka.
Mandeha miadana ny fotoana, ary hitanao fa maniry ny minitra sy ora maro ianao hahatratra ny fampiononana torimaso na ny fiatoana amin'ny faran'ny herinandro.
Mijery ny taona ao aorianao ianao ary tsy mahatsapa fahombiazana. Manopy ny masonao amin'ny ho avy ianao ary tsy mahita afa-tsy ny potiota very maina fotsiny.
Toa tsy misy dikany mihitsy ny fotoana.
ahoana no ahafantarana raha te hanao firaisana fotsiny ny bandy
Raha miasa ianao dia manomboka manao hadisoana kely tsy misy dikany satria tsy afaka mifantoka. Tsy milatsaka an-tsitrapo amin'ny asa ianao ary misaona ny vintanao rehefa voatendry aminao izy ireo.
Miezaka ny hiala ianao amin'ny fanaovana ny kely indrindra takiana aminao izay ilaina fotsiny mba tsy horoahina.
Miova ny fisehoanao ara-batana: very ny jironao ny masonao, boribory mainty no miseho eo ambaniny, milatsaka ny sorokao, miondrika ianao ary mikororosy, manjary mahia ny hoditrao.
Mihamalemy ny hery fiarovanao ary marary ianao matetika, izay mihinana ny fitondran-tenanao efa tsy misy fangarony.
Manomboka manontany ny zavatra rehetra ianao.
Ho toy izao ve ny fiainako? Tsy misy zavatra hafa andrasana intsony? Natao hahatsapa izany foana ve aho?
Izaho ve…? Tokony…? Ahoana raha…? Fa maninona aho…? Misy ve…?
Mitady vahaolana ny sainao. Mitady ny fanasitranana amin'ny aretinao manokana ianao.
Mikaroka mafy ianao, raha ny marina, mandray anjara amin'ny fahatsapanao havizanana. Manaova ny sainao amin'ny alàlan'ny fandehanana mitety faribolana ianao, ary mamerimberina mametraka ireo fanontaniana ireo ihany.
Maniry mafy ny fiononan'ny valiny ianao, nefa mahalana vao misy.
zavatra hatao rehefa any an-trano irery sy leo
Manomboka mijaly ny fifandraisanareo. Ny havizananao sy ny tsy fanananao hafanam-po amin'ny zavatra rehetra dia manimba ny fifandraisanao tamin'ny hafa.
Tsy ianao intsony te-hanao zavatra satria tsy manana angovo fotsiny ianao.
Ny ankamaroan'ny resadresaka dia toa fofonaina tsy misy dikany raha tsy hiresaka afa-tsy ny ala tsy misy dikany amin'ny fiainana.
Manomboka mahita ny fiarahan'ny alika, saka ary biby hafa mahafinaritra kokoa noho ny an'ny olombelona ianao. Mialona ny toetran'izy ireo tsy miraharaha ianao.
Hitanao ny onjam-peo tsy misy farany ao amin'ny fahana amin'ny haino aman-jery sosialy ary manjombona ianao. Saripika kely an-tapitrisany maro miara-feno - izany ve no atao hoe fiainana?
Manadio tena amin'ny alikaola, zava-mahadomelina, sakafo ary fahitalavitra ianao, izay ahafahanao mamono azy tanteraka amin'ny orinasa misy azy. Izay rehetra mampitony ny sainao vizana.
Mila mamerina mamerina. Fa ahoana?
Mamelombelona ny fanahinao
Raha tokony hamerina ilay hafatra mitovy indray aho dia tiako ny mitondra anao any amin'ireo lahatsoratra hafa eto amin'ny A Conscious Rethink.
Ao amin'izy ireo dia mandrakotra lohahevitra mifamatotra akaiky amin'ny faharerahana misy sy ny fikatsahana mitady dikany.
Ireo lahatsoratra ireo dia mirakitra lesona manan-danja tsy tambo isaina sy torohevitra azo ampiharina amin'ny fomba hisintonana ny tenanao hiala ny harenanao.
Fa ity misy iray hafa.
Vakio. Mihainoa. Jereo. Mianara.
Tsy ianao no olona voalohany nahatsapa ho reraka sy tsy nisy lalana. Tsy ianao no ho farany.
Ny fahazoana ny toerana misy anao eto amin'ity izao tontolo izao ity sy ny fanaovana fanovana tsara eo amin'ny fiainanao dia dingana iray maharitra ary iray izay ilainao namana.
Avelao ny boky ( ireto misy sosokevitra vitsivitsy ), podcast, famelabelarana, lahateny, lahatsoratra amin'ny magazine, ary ny endrika fampahalalana hafa rehetra.
Raiso am-pahamatorana ny fahasalamanao ara-tsaina, ara-pihetseham-po ary ara-panahy. Fahano amin'ny lesona sy ny fitaomam-panahin'ny hafa ny tenanao. Mamelona ny fanahinao.
Miadana, fa azo antoka, ho hitanao ny fiakaran'ny herinao ary hiverina ny antony manosika anao.
Ary rehefa mahatsiaro ho velona kokoa ianao dia aza atsaharo ny sakafo. Ny vatanao, saina ary fanahinao dia mila fahanana isan'andro.
Ataovy ho fanoloran-tena mandritra ny fiainana manontolo izany.
Aza adino: ny dingana voalohany no sarotra indrindra. Mahatsiaro ho rava ianao izao, ary toa fandaniam-potoana hafa fotsiny ity.
Tsy izany. Matokia ahy.
Ny dingana tsirairay dia hanome hery anao handray ny manaraka, ary ny manaraka, ary ny manaraka.
iza no nandresy teo anelanelan'ny goldberg sy brock lesnar
Efa nanomboka ianao. Tohizo hatrany.
famantarana ny vadiko tsy tia ahy
maninona isika no mandratra ireo tiantsika